मधेसवादी दल पनि चुनावमा सहभागी हुने संकेत, पढ्नुहोस् शुक्रबार दिनभरका खबर - Machhapuchhre FM Nepalese FM
Has the latest shooting affected French voters' plans?21st April 2017Woodrow Wilson Pushed U.S. Into World War I And Communism, Fascism And Nazism Resulted21st April 2017
मधेसवादी दल पनि चुनावमा सहभागी हुने संकेत, पढ्नुहोस् शुक्रबार दिनभरका खबर	Published by
Tags काठमाडौं वैशाख ८ – आन्दोलनरत मधेसवादी दल चुनावमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ । शुक्रबार सरकारसँग भएको छलफल सकारात्मक भएपछि मधेसवादी दल चुनावमा सहभागी हुने संकेत देखिएको हो । शनिबार फेरि बस्ने बैठकपछि यसको टुंगो लाग्नेछ । शुक्रबार दिनभरका मुख्य खबर पढ्नुहोस् ।
संशोधनका केही बुँदामा मोर्चासँग सामान्य सहमति भएको र शनिबार दिउँसो २ बजे फेरि बैठक बसेर सहमति गरिने कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । मोर्चाकै माग अनुसार संधिवानको धारा २ सय ७४ लाई संशोधन गरिने स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा सकरात्मक छलफल भएको पौडेलले बताउनुभयो । बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मधेसवादी दलका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले परिमार्जन सहित संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए आफूहरु चुनावमा सहभागी हुने बताउनुभयो । चुनाव बिथोल्न खोज्नेमाथि कार्वाही हुने गृहमन्त्रीको भनाई
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र नीधिले चुनाव विथोल्न खोज्ने जो कोहीलाई पनि कारवाही गर्ने बताउनुभएको छ । काभ्रेमा ११ जिल्लाको सुरक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै निधिले सरकारले मधेशी मोर्चालाई चुनावमा ल्याउन हदैसम्मको लचकता अपनाईरहेको बताउनुभयो । चुनावलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पत्रकारिता विभाग र जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले आज गरेको कार्यक्रममा यादवले सञ्चारमध्यमले पस्किएका सामग्रीबाट आचारसंहिता उल्लङ्घन भई हालसम्म आयोगले कुनै हैरानी व्यहोर्नु नपरेको बताउनुभयो । भोट दिनको लागि गाउँ फर्कन सुरु
स्थानीय तहको चुनावमा मतदानका लागि अहिले सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाका वासिन्दाहरु घर फर्किन थालेका छन् । कामका लागि जिल्ला बाहिर तथा छिमेकी देश भारत गएकाहरु स्थानीय तहको चुनावमा मत हाल्न घर फर्किन थालेका हुन् । राष्ट्रपति भारत भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फिर्ता
भारतको पाँच दिने राजकीय भ्रमण पूरा गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश फर्किनुभएको छ । उहाँ शुक्रबार साँझ स्वदेश फर्किनुभएको हो । भारतमा रहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले त्यहाँका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भेटमा भारतीय पक्षले नेपालको संविधान कार्यान्वयन र स्थानीय तहको चुनावको विषयमा चासो देखाएका थियो । सरकारको ९ महिने उपलव्धी सार्वजनिक
सरकारले स्थानीय तहको गठन र काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनु आफनो मुख्य उपलब्धी भएको दावी गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ९ महिनामा गरेका काम सार्वजनिक गर्दै वैशाख ३१ गते चुनाव घोषणा हुनुलाई पनि मुख्य उपलब्धी भनेको छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा साउन २० गते गठन भएको सरकारले यही बेला उच्च बृद्धिदर कायम गर्न सकेको र १२ बर्ष यता कै सबैभन्दा कम मुल्य बृद्धि कायम गरेको दावी पनि गरेको छ । आफ्नो जग्गा नभएका भूकम्प प्रभावितले घडेरी किन्न दुई लाख पाउने
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान पाउनेको सूचिमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका भूकम्प प्रभावितलाई घडेरी किन्न दुई लाख रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको कार्यकारी समितिको वैठकले लाभग्राही सूचिमा परेका तर आफ्नै जग्गा नभएका प्रभावितलाई, घडेरी किन्न दुई लाख रुपैयाँ दिने गरि कार्यविधि संशोधन गरेको प्राधिकरणका सहसचिव जनार्दन गुरागाईले जानकारी दिनुभयो । थुनिएको अरुण नदी बग्न थाल्यो
संखुवासभाको भोटखोलामा आएको बाढीले थुनिएको अरुण नदी अहिले बग्न थालेको छ । पानी बग्न थालेपछि खतरा केहि कम भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । भोटखोला गाउँपालिकाको स्याक्सिला गोलामा अरुण नदी थुनिएर लामो ताल बनेको थियो । नदी थुनिँदा बरुण बजार र कपासे गाउँका केही घरमा क्षति पुगेको र ८० घर जोखिममा परेको प्रहरीले जनाएको छ । जोखिममा रहेका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक गौतमकुमार केसीले बताउनुभयो । १५ वर्षीया बालिकाको विवाह मण्डपबाटै उद्दार
धादिङको बेनिघाटरोराङ गाउँपालिका हुग्दीबाट १५ वर्षीया बालिकाको विवाह मण्डपबाट उद्धार गरिएको छ । पौरखी सहकारीमा आवद्ध महिलाहरुले जोगिमारा प्रहरीको सहयोगमा बालिकाको विवाह रोकेको हो । उद्धार गरिएकी बालिकालाई जिल्ला बालकल्याण समितिले बालगृहमा राखेको छ । किसानको भिडमा ट्रक पस्दा २० जनाको मृत्यु
भारतको आन्ध्र प्रदेशमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका किसानको भिडमा ट्रक पस्दा २० जनाको ज्यान गएको छ । आन्ध्र प्रदेश प्रहरीका अनुसार पुलिस थाना अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका किसानको भिडमा एउटा ट्रक तिब्र गतिमा पसेको थियो । ट्रक बिजुलीको खम्बामा ठोक्किएपछि खम्बा ढलेर करेन्टसहितको ताराले प्रदर्शनकारीलाई थिचेको हो । घटनामा अरु १५ जना घाइते भएका छन् । एएफसी च्याम्पियनसिपको छनौट खेलमा नेपाल कठिन समूहमा
आउँदो वर्ष हुने १६ वर्ष मुनिको एएफसी च्याम्पियनसिपको छनौट खेलमा नेपाल कठिन समूहमा परेको छ । नेपाल रहेको समूह डीमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन इराकसहित भारत र प्यालेष्टाइन छन् । नेपाल रहेको समूह डीको छनौट खेल नेपालमै हुने एशियाली फुटबल महासंघ एएफसीले जनाएको छ । च्याम्पियनसिपको छनौटमा ४५ देशको सहभागिता छ । ४५ देशका १६ वर्षमुनिको टोलीलाई १० समूहमा विभाजन गरिएको छ । १० वटा समूहका विजेता र दोस्रो स्थानमा रहेका ५ टोली फाइनलमा पुग्नेछन् । छनौट खेल आगामी सेप्टेम्बर १६ देखि २४ सम्म हुनेछ । Source: Ujyalo network ले छापेको छ/
Related posts28th April 2017म्यानचेष्टर डर्बी खेल गोलरहित बराबरीमा सकियोRead more28th April 2017ब्राजिल, अर्जेन्टिना र मेक्सिको फिफाको कारवाहीमा परेRead more28th April 2017दुईतिहाइ पुग्ने संकेत देखेपछि मोर्चा लचिलोRead more	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Latest newsम्यानचेष्टर डर्बी खेल गोलरहित ... -- 28th April 2017ब्राजिल, अर्जेन्टिना र मेक्सिक... -- 28th April 2017दुईतिहाइ पुग्ने संकेत देखेपछि ... -- 28th April 2017जानी राख्नुहोस्, कस्तो फलफुल क... -- 28th April 2017चुनावको मिति सरेपछि ओखलढ्ंगाका... -- 28th April 2017तीन सय पूर्वलडाकु पर्यवेक्षक ,... -- 28th April 2017संशोधनको सकस : पारित होला कि न... -- 28th April 2017सम्पदाको पुनर्निर्माणमा छायाँ... -- 28th April 2017राष्ट्र बैंकले बेच्यो दुईवटा द... -- 28th April 2017आइपिएलमा बेंगलोरको खराब खेल प्... -- 28th April 2017